PressReader - Isolezwe: 2017-09-14 - Kutholwe izibhamu kwaboshwa abayisithupha
Kutholwe izibhamu kwaboshwa abayisithupha
Isolezwe - 2017-09-14 - IZINDABA - INTATHELI YESOLEZWE
KUBOSHWE amadoda ayisithupha kwatholwa izibhamu nezinhlamvu okungekho emthethweni, ngesikhathi amaphoyisa eqhuba umkhankaso wokulwa nobugebengu eMlaza naseDududu, ngoLwesibili ebusuku.
Okhulumela amaphoyisa KwaZuluNatal uLt Colonel Thulani Zwane, uthe ababoshiwe kusolakala ukuthi bangongqondongqondo ezehlakalweni ezithinta udlame lwezepolitiki, olwamatekisi nokubanjwa kwenkunzi kuhlonyiwe.
“Ngesikhathi amaphoyisa eqhuba lo mkhankaso eDududu naseMlaza, eziyishiyagalombili izibhamu ezitholiwe nezinhlamvu. Izibhamu ezitholwe amaphoyisa kukhona phakathi kwazo nesohlobo lwe-R5.” kusho uZwane.
Uthe bonke ababoshiwe babekwe amacala okutholakala nezibhamu nezinhlamvu ezingekho emthethweni. Uthe abahlanu kubo kulindeleke ukuthi bavele eNkantolo yeMantshi yaseMlaza kusasa, wathi oyedwa bekulindeke ukuthi avele eNkantolo yeMantshi yaseDududu, izolo.
UKhomishana wamaphoyisa osabambile KwaZulu-Natal, uMajor General Bheki Langa uncome iqha-za lamaphoyisa ngokuzinikela emsebenzini wawo ekwehliseni ukusabalala kwezibhamu ezingekho emthethweni.
“Lokhu kuboshwa kwabasolwa kubaluleke kakhulu, ikakhulu kulesi sikhathi esikuso njengesifundazwe. Kubalulekile ukuthi lezi zikhali ziqoqwe bese kuthi abasolwa bagqunywe ejele,” kusho uLanga.